Yakanakisa Jinjing Yakagadzirirwa Girazi Solutions Mugadziri uye Fekitori |Jinjing
Sneeze Guards akagadzirirwa kutsigira mabhizinesi mukugadzira hutano, nharaunda yakachengeteka nekuisa chipingamupinyi pakati pevashandi nevatengi.Inowanzo gadzirwa uchishandisa yakajeka hasha kana laminated kuchengetedza girazi, ichi chinodzivirira chiri nyore kuchena, chinokurudzira kufambidzana uye chinoderedza kupararira kwehutachiona.
Girazi chinhu chechinyakare chekuvaka aquariums.Zviri nyore kuchenesa asi zvakaoma zvikuru kukwenya.Girazi rinochengetedza kujeka kwayo nekufamba kwenguva.Asi girazi rakajairika rinotaridzika rakasvibira.Seyekutanga akanyanya kujeka kugadzira girazi muChina, Jinjing akatora girazi rakajeka rekuvandudza aquarium.Yepamusoro transmittance, mwenje webhuruu & yakatsetseka yakakwenenzverwa mipendero inoita kuti aquarium itaridzike zvakanyanya.
Kunyorera bhodhi girazi
Girazi machena mabhodhi imhando yemhando, inoshanda sarudzo inoita kuti kunyora nekudzima kusashande.Zvichida ndosaka magirazi machena ari kutora makamuri nedutu nekujeka kwavo uye nekubudirira.Nzvimbo dzadzo dzakatsetseka, dzisina porous dzinokutendera kuti utsvedze mvura yakadzima, kunyorova-kudzima, kana mamaki emvura-choko pabhodhi.
Girazi rine shiri
Shiri hadzigoni kuona girazi, ichi ndicho chikonzero magirazi mazhinji achibhururuka achienda kugirazi.Kune marudzi akawanda emagirazi anoshamwaridzana neshiri.Imwe mhando yakakurumbira ndeye ceramic enamel frit - iyo inogona kuvharidzirwa pagirazi mune chero patani kana dhizaini.
Iyo Skywalk, inozivikanwawo se "Glass Bridge" ndiyo inonyanya kufarirwa inokwezva munzvimbo dzakawanda dzinoyevedza.Jinjing ine hupfumi hwekugadzira & mhinduro ruzivo rweskywalk bridge.Jinjing yawana chitupa cheSGP, chakasanganiswa nerakawedzera gobvu rakachena girazi, rinovimbisa kuchengetedzwa kwegirazi mhinduro.
Zvakapfuura: Green House Girazi & Solar Girazi Solutions
Zvinotevera: Yakagadzirwa Zvakanaka China Kuvaka Zvishandiso Chekuchengetedza Girazi